Haddii aad rabto inaad rakibto iOS 11, si fiican u sug beta-ka dadweynaha | Wararka IPhone
Miyaad ka fikireysaa rakibidda iOS 11? Malaha way fiicantahay in la sugo
Sii deynta noocyada cusub ee nidaamka mobilada ee Apple waxaa badanaa laga filayaa sida biyaha bisha Maajo kuwa doonaya inay la kulmaan barnaamijkii ugu dambeeyay ee iPad-ka ama iPhone-ka gacanta hore. Warka la soo bandhigay intii ay socotey dhacdadii shalay, oo lagu daray qaar aan la sheegin oo la ogaanayo sida saacaduhu u socdaan, ayaa kor u qaaday heerka rajada ee heerarka kaliya ee la gaaro xilligan oo kale sanadka. Laakiin waa fikrad fiican in la rakibo iOS 11 hadda?
Ka dib markii ku dhowaad maalin leh nooca ugu dambeeya ee iOS ee iPhone-kayga, jawaabta gaaban ee su'aasha kor ku xusan waa diidmada aamusnaanta wajiga duruufaha. Illaa aad dano gaar ah ka leedahay beta-ka, rakibidda nooca ugu horreeya ee loogu talagalay kuwa wax dhisa badiyaa maahan mid ka mid ah fikradaha ugu wanaagsan, maadaama ay had iyo jeer ku dhacaan khaladaad yaryar, xasillooni-darrada guud iyo isticmaalka batari aan la tixgelin karin.
In kasta oo xaqiiqda ah in beta-kani ugu horreeyay - laga soo qaatay waayo-aragnimadayda iyo wixii aan awooday inaan ku indha-indheeyo waaya-aragnimada 'kuwa kale ee hore u qaatay' - ma soo bandhigayso guul-darrooyin waaweyn, dib-u-dhac guud ee nidaamka ayaa la arki karaa, ficillada mararka qaarkood Jooji shaqada, shaqada, kuleylka kuleylka, iwm ... Waxba ma jiraan wax halis ah kadib, laakiin maahan waxqabadka qofka laga filayo aaladdaada boqolaal euro. Tan waa inaan ku darnaa in nooca horumariyeyaashu uusan si rasmi ah u heli karin qof walba, markaa waa inaad bixisaa sharaabaadyo aad iska dhigto si aad u rakibtid.
Talada ayaa ah in la sugo inta Apple ay sii deynayso betasyada dadweynaha bil gudaheeda (qiyaastii). Betas in, markan, waxaad kala soo bixi kartaa adigoo iska diiwaangelinaya barnaamijka laga heli karo websaydhkaaga. Waqtigaas kadib inbadan oo ka mid ah khaladaadkan ugu horeeya horey ayaa loo saxay waxaadna awood u yeelan doontaa inaad ku raaxeysato khibrad wanaagsan oo marka hore leh iOS 11.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 11 » Miyaad ka fikireysaa rakibidda iOS 11? Malaha way fiicantahay in la sugo
Waxaan ku tijaabinayaa jiilka 6-aad ee iPod taabashada batteriguna haba yaraatee ma sii soconayo, iPod-ka gadaal ayuu ka kululaanayaa, aad ayuu u gaabiyaa ...
Markaa sidoo kale waxay ahayd inaan "la dagaallamo": Wax baan furaa, isagaa ii xidha; Waxbaan dhaqaajiyaa, isagaa hawl galiyaa ... 😀
Wixii aan ka aqrinayay, beta-kan ayaa xoogaa dagaal ah ku qaadaya waxqabadka iyo arrimaha batteriga. Laakiin wixii aan awooday inaan arko, naqshadeynta ayaa aniga ila muuqata. Waxaan rajeynayaa in marka ay ku jirto qaab deggan, ay wax ka beddelaan isticmaalka batteriga ee codsiyada.
Dhibaatooyinka ay beta tani siinayso waa wax iska caadi ah. Waa inaan ka fikirnaa inay tahay nooca ugu horreeya ee ku dhex jira iOS 11, oo leh isbeddelo badan. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad tijaabiso mustaqbalka, markaan tagno beta 4 ama 5, oo yeelan doona "caadi" waxaas oo dhan.
Oo haddaan mar hore rakibay, sidee baan u rujiyaa, ama maadaama ay tahay mid guud, miyaan dib u cusbooneysiin karaa?
Jawaab Gustavo Ochaeta
Waad ku xidhi kartaa qalabkaaga kombiyuutar iTunes ah oo aad ugu soo celin kartaa noocii ugu dambeeyay ee dadweynaha ee iOS 10. Haddii aad kuwaan sameyso, markaa waxaad isticmaali kartaa kayd ah oo laga sameeyay isla aaladdaas, laakiin lagama abuuri karo beta-ka iOS 11 , laakiin waa in laga abuuraa macruufka 10.
Oo haddaan mar hore rakibay, sidee baan u rujiyaa, ama maadaama ay tahay mid caam ah, miyaan markale rakibi karaa ?????
Waa inaad ka soo degsataa ips-ka macruufka 10.3.2 oo aad iphone-ga ku xirtaa itunes oo aad ku dhigtaa qaabka dfu (dib u bilaabi oo markuu tufaaxu soo baxo, sii daa badhanka korontada laakiin guriga ama mugga hoos u dhig iphone 7) itunes-na ku ogaan iPhone-ka qaabka dfu waxaadna siisay inaad dib u dhigto adoo riixaya furaha shif ee kombuyuutarka isla waqtigaas oo uu qaban doono shaqada…. Waxaan cadeynayaa inaad kaliya isticmaali karto keydkii ugu dambeeyay ee aad ku sameysay macruufka 10
Tani waxay mar horeba ii caddaynaysaa hal shay:
IOS waxay noqotay shay ganacsi oo kaliya, sanadba sanadka ka dambeeya, waxay "cusbooneysiiyaan" ...
Ma fahmin sababta jahwareerka noocaas ah. Waxaan hadda haysannaa macruufka 10.3.2 si aad u fiican loo habeeyay ...
Maxay cadaabta ugu beddeleysaa nidaam mar kale qaladaad ka buuxi doona?
Waa maxay dareenka uu Apple qaadanayo beryahan? Qalalaaseyn dhakhso leh oo dhakhso leh?
Tim Cook markii uu furayay shirka cusub ee sanadkan, wuxuu sheegay inuu noqon doono soo bandhigiddii ugu fiicneyd ilaa maanta ...
Waa beta, maxaad dooneysaa inaad qalad la'aan ku dhaafto? Sug nooca ugu dambeeya ee iOS11 bisha Oktoobar waana hubaal inay u shaqeyn doonto sidii la rabay. Waxaan rakibey beta maxaa yeelay waxaan jeclahay inaan tijaabiyo laakiin waxaan horey ugu soo laabtay iOS10 6-dii. Waan gaabsanahay mararka qaarna xoq ayaa igu dhaca mana aanan dareemin inaan sidaas ku ahaado taleefankayga gacanta.
Waxaan u maleynayaa inaan rakibi doono beta 3 ama 4 oo ka fiicnaan doona.
Ku jawaab Natxo
Sida saxda ah. Dhadhankeyga, Apple kuma qasbo qofna inuu rakibo betas. Waa isticmaalaha ugu dambeeya ee go'aansada inuu tijaabiyo nidaamyada wali horumarka ku jira iyo in kale.
Qayb ahaan waad saxantahay, waa noocyo cusub oo lagu cusbooneysiiyey khaladaad badan oo badan. Dhibaatadu waxay imaaneysaa inay jiraan dad ku caajisay in wax walboo si sax ah isku mid yihiin had iyo jeer, sababtaas darteed waxaan u maleynayaa inay lagama maarmaan tahay in wax laga beddelo. Waqtigan xaadirka ah waxaan ku jirnaa beta-kii ugu horreeyay ee iOS 11, taas oo caadi ah in ay "ka buuxdo khaladaad", laakiin waxaas oo dhan "duub" ee betas-ka ay sameeyaan si ay ugu dambeyntii u soo bandhigaan dadweynaha iyo dhammaadka isticmaaleyaasha, nooc ka sii badan filaayo in si fudud cayayaanka loo heli karin. Sidoo kale, markii la daabaco, Apple waxay sii wadi doontaa raadinta khaladaadka yar yar ee suurtogalka ah iyo cilladaha amniga, sababtaas awgeed waxaan helnaa noocyo nooca iOS 11.XX ah, iyo horumarin cusub oo lagu dari karo nidaamka, iOS 11.X.
Waa run inay siiso guul darrooyin, laakiin ka sarreeya dhammaan arrimaha batteriga. Waan sii wadi doonaa beta illaa inta ku xigta oo hubaal sii wanaajin doonta batteriga mar labaad. Isla sidaas ayaa ku dhacday beta-ka iOS 10.
Ku jawaab Vick
Apple wuxuu bilaabay laba ogeysiis cusub si kor loogu qaado iPad Pro
11 astaamood oo cusub oo iOS 11 ah oo Apple uusan ku xusin Keynote